တရုတ်စတိုင် အရက်သောက်ခြင်း။ | Language Century Language Century
5:09 AM C-Text , Chinese
တရုတ်လူမျိုးတွေ ဖိတ်ကြားတဲ့ ဧည့်ခံပွဲတွေကို သင် တက်ရောက်ဖူးပါသလား။ တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့အတူ သင် အရက်သောက်ဖူးပါသလား။
酒 文 化 是 中 国 文 化 中 的 一 个 重 要 组 成 部 分 。
အရက်ယဉ်ကျေးမှုဟာ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွေထဲက အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
在 中 国 最 具 有 代 表 性 的 酒 莫 过 于 白 酒 了 ，当 然 现 在 大 家 为 了 赶 时 髦 ，也 会 学 学 西 方 国 家 喝 葡 萄 酒 ，但 是 更 多 的 还 是 喝 白 酒 。
တရုတ်ပြည်မှာ Baijiu ဟာ ကိုယ်စားပြုမှုသဘောနဲ့ အပြည့်စုံဆုံးအရက် ဖြစ်ပါတယ်၊ မျက်မှောက်ခေတ် လူတွေဟာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲ စီးမျောလာကြပြီး၊ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေကို အတုယူကာ စပျစ်ဝိုင်ကို သောက်ကြပေမယ့်လည်း၊ အများစုက Baijiu ကို သောက်နေကြတုန်းပါပဲ။
中 国 人 常 常 把 酒 当 作 一 种 交 际 工 具 。
တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ အရက်ကို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကိရိယာ တစ်ခုအဖြစ် အမြဲသုံးလေ့ရှိပါတယ်။
商 务 洽 谈 ，请 客 吃 饭 总 少 不 了 喝 酒 。
ကုန်သွယ်မှုကိစ္စ စေ့စပ်ဆွေးနွေးတာတွေ၊ ထမင်း ဖိတ်ကျွေးတာတွေမှာ အရက်မသောက်လို့တော့ လုံးဝမဖြစ်ကြပါဘူး။
对 方 敬 酒 ，说 “ 干 杯 ”，如 果 你 不 喝 ，或 者 不 把 酒 杯 里 的 酒 一 口 气 喝 完 ，就 是 不 给 对 方 面 子 。
တဖက်သားက အရက်နဲ့ ဂုဏ်ပြုပြီး "Cheers!" လို့ ပြောမယ်၊ တကယ်လို့ သင်က မသောက်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် အရက်ခွက်ထဲက အရက်ကို တကျိုက်တည်းကုန်အောင် မသောက်ဘူးဆိုရင်၊ တဖက်သားကို မလေးစားရာ ရောက်တာပေါ့။
喝 得 越 多 ，就 是 越 给 对 方 面 子 ，对 方 就 要 会 高 兴 ，有 很 多 洽 谈 都 是 在 这 样 的 气 氛 下 谈 成 的 。
သောက်တာ များလေ၊ တဖက်သားကို လေးစားရာရောက်လေ၊ တဖက်သားက ကြည်နူးဝမ်းမြောက်လေပေါ့၊ စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှု အများကြီးက ဒီလိုအခြေအနေတွေအောက်မှာ ပြောဆိုအောင်မြင်ခဲ့ကြတာပါ။
所 以 ，中 国 有 些 公 司 在 招 聘 面 试 时 ，会 问 你 能 不 能 喝 酒 ，能 喝 酒 ，才 能 进 公 司 工 作 。
ဒါကြောင့် တရုတ်ပြည်မှာ တချို့ကုမ္ပဏီတွေက အလုပ်ခေါ် အင်တာဗျူးတဲ့အခါ၊ အရက် သောက်နိုင်ရဲ့လားလို့ သင့်ကို မေးလိမ့်မယ်၊ အရက်သောက်နိုင်မှသာ ကုမ္ပဏီမှာဝင်ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်မှာပါ။
中 国 人 认 为 喝 酒 不 能 喝 得 太 杂 ，这 样 容 易 醉 。
အရက်သောက်တာဟာ သိပ်အများကြီး ရောစပ်သောက်လို့ မရဘူး၊ အဲဒီလိုမျိုးက မူးလွယ်တယ်လို့ တရုတ်လူမျိုးတွေက ယူဆထားပါတယ်။
所 以 在 中 国 一 顿 饭 下 来 ，基 本 上 只 会 喝 一 种 酒 ，不 会 一 会 儿 喝 白 酒 ，一 会 儿 喝 啤 酒 ，一 会 儿 喝 红 酒 。
ဒါကြောင့်မို့ တရုတ်ပြည်မှာ ထမင်းတစ်နပ်စားရင်၊ အဓိကအားဖြင့် အရက်တစ်မျိုးပဲ သောက်ကြပါတယ်၊ တော်ကြာနေ Baijiu သောက်လိုက်၊ ခဏနေ ဘီယာသောက်လိုက်၊ ခဏကြာ ဝိုင်သောက်လိုက် စသည်ဖြင့် မလုပ်ကြပါဘူး။
现 在 也 有 很 多 中 国 人 觉 得 喝 酒 伤 身 体 ，所 以 当 别 人 敬 酒 时 ，他 们 会 说 “ 对 不 起 ，妻 管 严 ，不 能 喝 酒 ”。
ဒီနေ့ခေတ်မှာ တရုတ်လူမျိုးအများစုက အရက်သောက်တာဟာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ခံစားလာကြတယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ တခြားသူက အရက်နဲ့ ဂုဏ်ပြုတဲ့အခါ၊ " ဆောရီးနော်၊ မိန်းမက အရမ်းကျပ်လို့ အရက်သောက်လို့ မရဘူး " လို့ သူတို့က ပြောပါလိမ့်မယ်။
“ 妻 管 严 ” 的 意 思 是 “ 妻 子 管 得 很 严 ” ，是 从 气 管 炎 这 个 词 来 的，因 为 读 音 相 似 ，所 以 大 家 都 喜 欢 用 。
"妻管严" ဆိုတာ " မိန်းမက စည်းကမ်း အရမ်း တင်းကျပ်တယ် " လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်၊ "气管炎 လေပြွန်ရောင်နေတယ် " ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ဆင်းသက်လာတာပါ၊ ဖတ်တဲ့ အသံထွက်တူနေတော့ အားလုံးက သုံးရတာ သဘောကျကြပါတယ်။
★ အသုံးအနှုန်း သတိပြု - 妻管严 qīguǎnyán နဲ့ 气管炎 qìguǎnyán
当 你 说 “ 对 不 起 ，妻 管 严 ” 时 ，很 多 时 候 大 家 就 心 照 不 宣 ，不 会 给 你 敬 酒 了 。
" ဆောရီးပါ၊ မိန်းမက အရမ်းကျပ်တယ် " လို့ သင်ပြောလိုက်တိုင်းမှာ၊ အားလုံးက သင့်ရဲ့သဘောကို နားလည်သွားပြီး၊ သင့်ကို အရက်နဲ့ ဂုဏ်ပြုမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
3. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်
5. 中〔zhōng〕အထဲ။ အတွင်း
6. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
7. 一个〔yíge〕တစ်ယောက်။ တစ်ခု
10. 部分〔bùfēn〕အစိတ်အပိုင်း။ တချို့တလေ
11. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသည်
12. 最〔zuì〕အ ... ဆုံး
13. 具有〔jùyǒu〕... နှင့် ပြည့်စုံသည်။ ရှိသည်
15. 性〔xìng〕သဘော။ သတ္တိ
16. 莫过于〔mòguòyú〕သည်က ... ပင်ဖြစ်၏
18. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
19. 当然〔dāngrán〕... တာပေါ့။ မှာပေါ့
22. 为了〔wèile〕... အတွက်
23. 赶时髦〔gǎnshímáo〕 ခေတ်မီသည်
24. 也〔yě〕... လည်း။ လည်းပဲ
25. 会〔huì〕... လိမ့်မယ်။ တတ်သည်
26. 学〔xué〕 လေ့လာသင်ယူသည်
28. 国家〔guójiā〕 နိုင်ငံ။ တိုင်းပြည်
33. 还是〔háishì〕... သေးသည်။ သို့မဟုတ်
36. 把〔bǎ〕... ကို။ အား
37. 当作〔dāngzuò〕... အဖြစ် ထင်မှတ်သည်
39. 交际〔jiāojù〕 ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း
40. 工具〔gōngjù〕ကိရိယာ။ တန်ဆာပလာ
41. 商务〔shāngwù〕ကုန်သွယ်မှု အရေးကိစ္စ
42. 洽谈〔qiàtán〕 စေ့စပ်ဆွေးနွေးသည်
46. 总〔zǒng〕... လေ့ရှိသည်
47. 少不了〔shǎobùliǎo〕မရှိလျှင်မဖြစ်။ ... မှဖြစ်မည်
49. 敬酒〔jìngjiǔ〕ရိုသေစွာဖြင့် အရက်တိုက်သည်
50. 说〔shuō〕 ပြောသည်
51. 干杯〔gānbēi〕Cheers! ကန်းပေး
53. 你〔nǐ〕မင်း။ ခင်ဗျား။ နင်
54. 不〔bù〕မ ( အငြင်း )
55. 喝〔hē〕 သောက်သည်
56. 或者〔huòzhe〕ဒါမှမဟုတ်။ သို့မဟုတ်
59. 一口气〔yìkǒuqì〕တခါတည်း။ တဆက်တည်း
60. 完〔wán〕 ပြီးဆုံးသည်
62. 给〔gěi〕 ပေးသည်
64. 越...越〔yuè...yuè〕... လေ ... လေ
65. 就要〔jiùyào〕... တော့မယ်
71. 气氛〔qìfēn〕အခြေအနေ။ အရိပ်အယောင်
72. 在...下〔zài...xià〕... အောက်မှာ
73. 谈成〔tánchéng〕 ပြောဆိုအောင်မြင်သည်
79. 时〔shí〕... တဲ့အခါ
80. 问〔wèn〕 မေးမြန်းသည်
81. 能〔néng〕... နိုင်သည်
82. 才〔cái〕... သာ။ ... မှ... နိုင်မည်
86. 得〔de〕... တာ
92. 下来〔xiàlái〕... လာသည်။ ဆင်းလာသည်
93. 基本上〔jīběnshàng〕အခြေခံအားဖြင့်။ အဓိကအားဖြင့်
94. 只〔zhǐ〕... ပဲ။ သာလျှင်
96. 一会儿〔yíhuìr〕ခဏကြာ။ တော်ကြာနေ
100. 伤身体〔shāngshēntǐ〕ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေသည်
101. 当〔dāng〕 ပြုလုပ်သည်
104. 对不起〔duìbùqǐ〕 ဆောရီးပါ
105. 妻管严〔qīguǎnyán〕ဇနီးက စည်းကမ်းအရမ်း ကျပ်တယ်။ မိန်းမကို ကြောက်ရတယ်
106. 意思〔yìsī〕သဘော။ အဓိပ္ပာယ်
110. 从〔cóng〕... မှ။ က
111. 气管炎〔qìguǎnyán〕 လေပြွန်ရောင်ခြင်း
112. 这个〔zhège〕ဒါ။ ဒီဟာ
113. 词〔cí〕စကားလုံး။ ဝေါဟာရ
117. 相似〔xiāngsì〕ဆင်တူသည်။ အသွင်တူသည်
118. 喜欢〔xǐhuān〕ကြိုက်သည်။ သဘောကျသည်
119. 当〔dāng〕... တဲ့အခါ။ အတောအတွင်း
120. 时候〔shíhòu〕... တဲ့အခါ
121. 心照不宣〔xīn zhào bù xuān〕ဖွင့်မပြောဘဲ ရိပ်စားမိသည်
တရုတျလူမြိုးတှေ ဖိတျကွားတဲ့ ဧညျ့ခံပှဲတှကေို သငျ တကျရောကျဖူးပါသလား။ တရုတျလူမြိုးတှနေဲ့အတူ သငျ အရကျသောကျဖူးပါသလား။
အရကျယဉျကြေးမှုဟာ တရုတျယဉျကြေးမှုတှထေဲက အရေးကွီးတဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။
တရုတျပွညျမှာ Baijiu ဟာ ကိုယျစားပွုမှုသဘောနဲ့ အပွညျ့စုံဆုံးအရကျ ဖွဈပါတယျ၊ မကျြမှောကျခတျေ လူတှဟော ခတျေရစေီးကွောငျးထဲ စီးမြောလာကွပွီး၊ အနောကျတိုငျးနိုငျငံတှကေို အတုယူကာ စပဈြဝိုငျကို သောကျကွပမေယျ့လညျး၊ အမြားစုက Baijiu ကို သောကျနကွေတုနျးပါပဲ။
တရုတျလူမြိုးတှဟော အရကျကို ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး ကိရိယာ တဈခုအဖွဈ အမွဲသုံးလရှေိ့ပါတယျ။
ကုနျသှယျမှုကိစ်စ စစေ့ပျဆှေးနှေးတာတှေ၊ ထမငျး ဖိတျကြှေးတာတှမှော အရကျမသောကျလို့တော့ လုံးဝမဖွဈကွပါဘူး။
တဖကျသားက အရကျနဲ့ ဂုဏျပွုပွီး "Cheers!" လို့ ပွောမယျ၊ တကယျလို့ သငျက မသောကျဘူး၊ ဒါမှမဟုတျ အရကျခှကျထဲက အရကျကို တကြိုကျတညျးကုနျအောငျ မသောကျဘူးဆိုရငျ၊ တဖကျသားကို မလေးစားရာ ရောကျတာပေါ့။
သောကျတာ မြားလေ၊ တဖကျသားကို လေးစားရာရောကျလေ၊ တဖကျသားက ကွညျနူးဝမျးမွောကျလပေေါ့၊ စစေ့ပျဆှေးနှေးမှု အမြားကွီးက ဒီလိုအခွအေနတှေအေောကျမှာ ပွောဆိုအောငျမွငျခဲ့ကွတာပါ။
ဒါကွောငျ့ တရုတျပွညျမှာ တခြို့ကုမ်ပဏီတှကေ အလုပျချေါ အငျတာဗြူးတဲ့အခါ၊ အရကျ သောကျနိုငျရဲ့လားလို့ သငျ့ကို မေးလိမျ့မယျ၊ အရကျသောကျနိုငျမှသာ ကုမ်ပဏီမှာဝငျပွီး အလုပျလုပျနိုငျမှာပါ။
အရကျသောကျတာဟာ သိပျအမြားကွီး ရောစပျသောကျလို့ မရဘူး၊ အဲဒီလိုမြိုးက မူးလှယျတယျလို့ တရုတျလူမြိုးတှကေ ယူဆထားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ တရုတျပွညျမှာ ထမငျးတဈနပျစားရငျ၊ အဓိကအားဖွငျ့ အရကျတဈမြိုးပဲ သောကျကွပါတယျ၊ တျောကွာနေ Baijiu သောကျလိုကျ၊ ခဏနေ ဘီယာသောကျလိုကျ၊ ခဏကွာ ဝိုငျသောကျလိုကျ စသညျဖွငျ့ မလုပျကွပါဘူး။
ဒီနခေ့တျေမှာ တရုတျလူမြိုးအမြားစုက အရကျသောကျတာဟာ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစတေယျလို့ ခံစားလာကွတယျ၊ ဒါကွောငျ့မို့ တခွားသူက အရကျနဲ့ ဂုဏျပွုတဲ့အခါ၊ " ဆောရီးနျော၊ မိနျးမက အရမျးကပျြလို့ အရကျသောကျလို့ မရဘူး " လို့ သူတို့က ပွောပါလိမျ့မယျ။
"妻管严" ဆိုတာ " မိနျးမက စညျးကမျး အရမျး တငျးကပျြတယျ " လို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ၊ "气管炎 လပွှေနျရောငျနတေယျ " ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ဆငျးသကျလာတာပါ၊ ဖတျတဲ့ အသံထှကျတူနတေော့ အားလုံးက သုံးရတာ သဘောကကြွပါတယျ။
★ အသုံးအနှုနျး သတိပွု - 妻管严 qīguǎnyán နဲ့ 气管炎 qìguǎnyán
" ဆောရီးပါ၊ မိနျးမက အရမျးကပျြတယျ " လို့ သငျပွောလိုကျတိုငျးမှာ၊ အားလုံးက သငျ့ရဲ့သဘောကို နားလညျသှားပွီး၊ သငျ့ကို အရကျနဲ့ ဂုဏျပွုမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။
3. 是〔shì〕ဟုတျသညျ။ ဖွဈသညျ
5. 中〔zhōng〕အထဲ။ အတှငျး
6. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
7. 一个〔yíge〕တဈယောကျ။ တဈခု
10. 部分〔bùfēn〕အစိတျအပိုငျး။ တခြို့တလေ
11. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသညျ
12. 最〔zuì〕အ ... ဆုံး
13. 具有〔jùyǒu〕... နှငျ့ ပွညျ့စုံသညျ။ ရှိသညျ
15. 性〔xìng〕သဘော။ သတ်တိ
16. 莫过于〔mòguòyú〕သညျက ... ပငျဖွဈ၏
18. 了〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
19. 当然〔dāngrán〕... တာပေါ့။ မှာပေါ့
22. 为了〔wèile〕... အတှကျ
23. 赶时髦〔gǎnshímáo〕 ခတျေမီသညျ
24. 也〔yě〕... လညျး။ လညျးပဲ
25. 会〔huì〕... လိမျ့မယျ။ တတျသညျ
26. 学〔xué〕 လလေ့ာသငျယူသညျ
28. 国家〔guójiā〕 နိုငျငံ။ တိုငျးပွညျ
33. 还是〔háishì〕... သေးသညျ။ သို့မဟုတျ
37. 当作〔dāngzuò〕... အဖွဈ ထငျမှတျသညျ
39. 交际〔jiāojù〕 ပေါငျးသငျးဆကျဆံခွငျး
40. 工具〔gōngjù〕ကိရိယာ။ တနျဆာပလာ
41. 商务〔shāngwù〕ကုနျသှယျမှု အရေးကိစ်စ
42. 洽谈〔qiàtán〕 စစေ့ပျဆှေးနှေးသညျ
46. 总〔zǒng〕... လရှေိ့သညျ
47. 少不了〔shǎobùliǎo〕မရှိလြှငျမဖွဈ။ ... မှဖွဈမညျ
49. 敬酒〔jìngjiǔ〕ရိုသစှောဖွငျ့ အရကျတိုကျသညျ
50. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
51. 干杯〔gānbēi〕Cheers! ကနျးပေး
53. 你〔nǐ〕မငျး။ ခငျဗြား။ နငျ
54. 不〔bù〕မ ( အငွငျး )
55. 喝〔hē〕 သောကျသညျ
56. 或者〔huòzhe〕ဒါမှမဟုတျ။ သို့မဟုတျ
59. 一口气〔yìkǒuqì〕တခါတညျး။ တဆကျတညျး
60. 完〔wán〕 ပွီးဆုံးသညျ
62. 给〔gěi〕 ပေးသညျ
64. 越...越〔yuè...yuè〕... လေ ... လေ
65. 就要〔jiùyào〕... တော့မယျ
71. 气氛〔qìfēn〕အခွအေနေ။ အရိပျအယောငျ
72. 在...下〔zài...xià〕... အောကျမှာ
73. 谈成〔tánchéng〕 ပွောဆိုအောငျမွငျသညျ
80. 问〔wèn〕 မေးမွနျးသညျ
81. 能〔néng〕... နိုငျသညျ
82. 才〔cái〕... သာ။ ... မှ... နိုငျမညျ
92. 下来〔xiàlái〕... လာသညျ။ ဆငျးလာသညျ
93. 基本上〔jīběnshàng〕အခွခေံအားဖွငျ့။ အဓိကအားဖွငျ့
94. 只〔zhǐ〕... ပဲ။ သာလြှငျ
96. 一会儿〔yíhuìr〕ခဏကွာ။ တျောကွာနေ
100. 伤身体〔shāngshēntǐ〕ကနျြးမာရေး ထိခိုကျစသေညျ
101. 当〔dāng〕 ပွုလုပျသညျ
104. 对不起〔duìbùqǐ〕 ဆောရီးပါ
105. 妻管严〔qīguǎnyán〕ဇနီးက စညျးကမျးအရမျး ကပျြတယျ။ မိနျးမကို ကွောကျရတယျ
106. 意思〔yìsī〕သဘော။ အဓိပ်ပာယျ
110. 从〔cóng〕... မှ။ က
111. 气管炎〔qìguǎnyán〕 လပွှေနျရောငျခွငျး
113. 词〔cí〕စကားလုံး။ ဝေါဟာရ
117. 相似〔xiāngsì〕ဆငျတူသညျ။ အသှငျတူသညျ
118. 喜欢〔xǐhuān〕ကွိုကျသညျ။ သဘောကသြညျ
119. 当〔dāng〕... တဲ့အခါ။ အတောအတှငျး
121. 心照不宣〔xīn zhào bù xuān〕ဖှငျ့မပွောဘဲ ရိပျစားမိသညျ
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(69) 头
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(68) 喜
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(67) 风
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(66) 用
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(65) 看
ရထားပေါ်မှာ ဘယ်လို အချိန်ဖြုန်းမလဲ။
နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) တွင် တက်ရောက်နို...
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(64) 青
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(63) 空
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(62) 气
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(61) 么
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(60) 什
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(59) 关
သင်ရော နို့မှုန့်ဖိုး စုဆောင်းပြီးပြီလား။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(58) 奶
ကချင်ပြည်နယ် ရေခဲတောင်က ဆေးဖက်ဝင် - ရှီးပဒီး။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(57) 书
Pokémon Go ဂိမ်းဆော့ခြင်း။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(56) 出
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(55) 白
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(54) 里
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(53) 牙
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(52) 见
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(51) 又
ကောင်းမြတ် - တရုတ်ကားပစ္စည်းမျိုးစုံ ရောင်းဝယ်ရေး။
အိမ်သာတက်ရင် 上 ၊ မီးဖိုချောင်ဝင်ရင် 下 ။
ကုန်းဘောင်ကြီးကြော် - စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်း။
စာသားတွေ တစ်လုံးမှမပါတဲ့ ရည်းစားစာ။
အပြောကြီးတယ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(50) 面
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(49) 门
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(48) 也
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(47) 下
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(46) 巴
လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။